जानिराखौँ कस्तो व्यक्तिलाई अदुवाको सेवनले हानि गर्छ ।
प्राय, जसो नेपालीहरुको भान्सामा अदुवा अनिवार्य जस्तो प्रयोग हुन्छ । अदुवा सेवन गर्नु अति नै फाइदाजनक पनि हुन्छ । यसले शरीरलाई तातो बनाउँछ, रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी खस्खसाउने जस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति प्रदान गर्छ । तर, अदुवाको सेवन हरेकको लागि फाइदाजनक हुँदैन ।
कस्तो व्यक्तिलाई अदुवाको सेवनले हानि गर्छ । आज हामी त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौं, जसमा अदुवाको सेवनले हानि पुर्‍याउन सक्छ ।
दैनिक औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुका लागि
दैनिक औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । किनभने ती औषधिमा समावेश ड्रग्सहरु जस्तै बेटा(ब्लोकर्स, एन्टिकोगुलेन्ट र इन्सुलिन) अदुवासँग मिलेपछि खतरनाक मिश्रण बन्छ ।
गर्भधारण भएको समयमा अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । सुरुवाती महिनामा अदुवाको सेवन राम्रो भए पनि पछि यसको सेवनले नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । बच्चा जन्मनु तीन महिना अगाडि अदुवाको सेवन खतरनाक हुनसक्छ । यो समयमा अदुवाको सेवन गर्नाले प्रिम्याच्योर डेलिभरी हुने खतरा हुन्छ ।
अप्रेशन गर्न लागेका व्यक्तिहरुका लागि
अप्रेसन गर्ने व्यक्तिले दुई हप्ताअघिदेखि नै अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । किनभने अदुवाको सेवन गर्नाले रगत पातलो हुन्छ । जुन सामान्य स्थितिमा शरीरको लागि ठिक होइन । सर्जरीको समयमा अदुवाको सेवन गर्नाले तपाईंको शरीरबाट बढी मात्रामा रगत बग्न सक्छ ।
दुब्लो व्यक्तिको लागि अदुवाको सेवन हानिकारक हुन्छ । किनभने अदुवामा फाइबर हुन्छ र यसले शरीरको पीएच लेवललाई बढाउँछ । जसले गर्दा खाना पचाउने एन्जाइम्स एक्टिवेट हुन्छ । यसले चिल्लो पदार्थलाई तीब्र गतिमा उत्पन्न गराउँछ र भोक कम लाग्छ, जसका कारण वजन कम हुन थाल्छ ।
व्यक्तिमा रगत सम्बधी समस्या छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । किनभने अदुवाको सेवनले रगत पातलो हुन्छ । यहि कारणले गर्दा केही व्यक्तिहरुलाई हल्का घाउ हुँदा पनि रगत धेरै बग्छ ।
सावधान ! गर्भवती महिलाहरुले ‘धुम्रपान’ गर्दा जन्मने बच्चालाई पर्ने असरहरु।
काठमाडौं। धुम्रपान स्वास्थ्वको लागि सबैलाई हानिकार हुन्छ त्यसमा पनि गर्भवती महिलालाई विषेश गरेर असर
कसरी बनाउने चिसो मौसममा मुलायम छाला ?
चिसो बढेसँगै छाला सुख्खा हुन थाल्छ । छालाको नरमपना तथा चमक हराउन थाल्छ । जसले
चिसो मौसमः शरीरको लागि लसुनको महत्वपूर्ण भुमिका
लसुनले शरिरमा गर्मी पैदा गर्छ त्यसकारण चिसो मौसममा यसको प्रयोग निकै फाइदाजनक हुन्छ । लसुनले
मृगौलालाई सही तरिकाले राख्ने सामान्या जानकारी
मृगौला, मानव शरीरको विभिन्न संवेदनशील अंगहरु मध्ये एक हो । जसले शरीरभित्रका अनावश्यक पदार्थलाई